Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 8
Misy lainga tsy tsaroana ao…
Par Taratra sur 17/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Inona ny marina ny amin’ny voka-pifidianana? Mampisaritaka, mampikorontana an-toerana… Tsy vitan’izay, ahina hampiady aza amin’ny farany. Nahoana? Samy manana ny filazany izay miteny rehetra, na tokana ihany aza ny marina. Tokony hisy sa tsia, ohatra, ny fihodinana faharoa? Miankina amin’ny fivoahan’ny marina hatrany ifotony io. Nahoana no tsy avoaka hiaraha-mijery sy mampitaha ny fitanana an-tsoratra […]
Isika, tsy hiady…
Par Taratra sur 16/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tantara nisy sy niseho tatsy Afrika ka tokony hakantsika lesona. Averimberin’ireo teratany roandey isaky ny mahita ireo vazaha nampiady azy izy ireo rehefa mifanena aminy eny an-dalana ny hoe “Izahay, tsy hiady…”. Nandaitra izany rehefa naka lesona tamin’ny tantarany ity firenena ity. Rotiky ny ady an-trano sy ny fifamonoana noho ny nataon’ny vazaha i Roanda. […]
Maro loatra ny ….!
Par Taratra sur 15/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mivoaka tsikelikely ny voka-pifidianana. Mivoaka tsikelikely manaraka izany ihany koa ny fanehoan-kevitra izay zary fifampiampangana… Toa mitarika moramora any amin’ny tsy fanekena ny vokatra farany, raha izao no mitohy. Mbola raharaha hafa indray ny hamahana izany raha sanatria ka tonga tokoa ny « tokoa moa izany ». Maro loatra ny fotoana verivery foana eto Madagasikara. Maro loatra […]
Par Taratra sur 14/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tao anatin’ny andro vitsivitsy izay, lasibatry ny tsikera sy fanakianana mivaivay ry zareo eny Alarobia. Ireo tompon’andraikitra isan-tokony ao amin’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (Ceni) izany. Tsy avy amin’ireo kandidà nifaninana tamin’iny fifidianana fihodinana voalohany teo iny ihany ny fanakianana sy tsikera, fa avy amin’ny olom-pirenena maro mpanara-baovao, mahatsiaro na mahatsapa ny amin’ny fomba […]
Tsy mahandry tantana, miandry tataka…
Par Taratra sur 13/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Na ahoana na ahoana, efa misy lamina sy tantana ny fanatanterahana ny fifidianana: rafitra, lalàna… Hatramin’ny famoahana vokatra farany izay. Amin’izany, misy ny tsy mahandry tantana. Tsy inona na tsy iza fa izay mitady hanakoro ny tantana, na manakoro tantana… manakorontana. Toheriny ny tantana, ny rafitra, ny lalàna… Amin’ny toy izao, mazava fa izay tsy […]
Mahay resy, mahay mandresy…
Par Taratra sur 12/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mazava izao ny fironan’ny voka-pifidianana. Na izany aza, mandeha hatrany ny adihevitra etsy sy eroa, ny fitsikerana ny fandehan’ny fandatsaham-bato, ny fanamarinan-tena amin’ny vato azo… Misy ny tsy manaiky ho resy? Na tsy te ho afa-baraka, ka mamorona antsangana tsy amin’orana handisoana ny faharesena… Tsy mahalala tena fa aloam-bahoaka matoa tsy mahazo vato? Tsy ny […]
Resy tsy miady, resy na miady…
Par Taratra sur 10/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Amin’izao, andrasana izay ho voka-pifidianana farany; eny, na efa mazava aza ny fironana… Mbola hisy ihany ve ny korontana? Na hikorontana, na hanakorontana… Adin’ombalahin’ny mpianakavy, hono: ny resy, tsy akoraina; ny mandresy, tsy hobiana. Atao rava samy marina izao izany ny raharaha? Na izany aza, hakana lesona mandrakariva ny lesoka. Aleo joko mihasolanga toy izay […]
Mila fahamatorana sy famatorana…
Par Taratra sur 09/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Vita ny fifidianana, ho hita eo ny vokatra. Na izany aza, lanja miakatra ny fiainana: mila hakana lesona ireo lesoka maromaro tetsy sy teroa. Mila fahamatorana amin’izay: mba hialana amin’izay ny kitsapatsapa, ny fitompoana teny fantatra, ny fandehanana irery amin’izay momba ny fiainam-pirenena iombonana… Ahoana, ohatra, ny amin’ny lalàm-pifidianana, rehefa vita sy milamina ny amin’izao […]
Miandry amim-pitoniana sy amim-paharetana…
Par Taratra sur 08/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Vita ny fandatsaham-bato. Arahaba soa, arahaba tsara; eny, na nisy aza ny indro kely maromaro tetsy sy teroa. Hakana lesona ny lesoka hanitsiana ny ho avy. Hanao ahoana ny ho vokatra? Miandry amim-pitoniana sy amim-paharetana ny rehetra; eny, na efa somary tsinjo sompirana ihany aza izay ho voka-pifidianana ankapobeny. Izao indrindra no ifampitsinjovana amin’ny hoe […]
Adidy fa tsy didy ny mifidy
Par Taratra sur 06/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Ela ny ela, tonga ny andro fandatsaham-bato. Araka izay maharesy lahatra ny mpifidy tsirairay ho filohan’ny Repoblika mandritra ny dimy taona manaraka io. Hanao ahoana? Be izay fifamahofahoan-javatra nialoha sy nandritra ny fampielezan-kevitra izay. Tsy fampielezan-kevitra akory aza no nataon’ny sasany, fa zavatra hafa. Teo ny fifandroritana sy fifandirana ny amin’ny lalàm-pifidianana, ohatra. Nifamatotra amin’izany […]
Par Taratra sur 05/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
“Ny ahiahy, tsy ihavanana.” Amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika izao, eo hatrany izay ahiahy tsy ihavanana izay; eny, na efa andro aza sisa no isaina. Nahoana? Efa hatrany am-boalohany ny tsy fifampitokisana, ka tsy mahafa-bela ny fiandrasan’ny sasany kendry tohina, ny filana kisa, ny fitsikerana, fanoherana… Anisan’ny fototr’izany, ohatra, ny lalàm-pifidianana, nahitsin’ny Fitsarana avo momba ny […]
Ny tia kely, tsy mahazo be…
Par Taratra sur 03/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Amin’izao fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika izao, resabe hatrany ny amin’ny volabe ampiasain’ny kandidà. Amin’izany, tsy ilaozan’izay manao fafy katrana: fampielezam-bola no atao fa tsy fampielezan-kevitra. Lany hevitra ka mandany vola? Na tsy manantena ho voafidy fa manahy tena ka any amin’ny vola no manala vonkina. Amin’izany ihany koa, mandeha ho azy ny resabe hoe: […]
Par Taratra sur 02/11/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Inona àry no fototr’izao fihotakotahana mialoha ny fiatrehana ny fifidianana filohan’ny Repoblika izao? Andro sisa no isaina. Nefa ahina ny fisavoritahana, korontana, fifanomezan-tsiny, fifampiampangana, fifanenjehana… Tsy anisan’ny fototra sy fositra amin’izany ve ny tsy fanajan-dalàna? Tsy hita tsinona izay azo tahafina amin’ny fanajana sy ny fampiharan-dalàna, samy manao izay saim-pantany. Efa voka-javatra fa tsy anton-javatra […]
Par Taratra sur 31/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa ho isan’andro ny lozam-pifamoivoizana mitranga eto amintsika, na eto an-dRenivohitra, indrindra nyany amin’ny lalam-pirenena. Matimaty foana ireny mpandeha ireny, tsy misy ny fepetra mivaingana, azo tsapain-tanana mifanaraka amin’ny loza miseho, na hisorohana ny loza mety hiseho. Voalohany amin’ny resaka fandraisana fepetra isika rehefa misy ny zava-miseho. « Handraisana fepetra hentitra… hentitra ny fepetra raisina… », hoy […]
Fihoaram-pefy sy fanakorontanana fifidianana: nomena baiko hisambotra avy hatrany ny Emmo/Reg
Par Taratra sur 30/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
« Aoka ho tony ! », hoy ny voalazan’ny Gazety Taratra, omaly alatsinainy. Tsy misy mahadiso izany satria rehefa tony, afa-misaina… Rehefa afa-misaina, tsy ho voarebireby. Rehefa tsy voarebireby, tompon-tsafidy. Rehefa tompon-tsafidy, tompon’ny hoavin’i Madagasikara sy ny taranany. Hatrany, hatrany… ! Raha hatsimbadika kely ny fomba filaza : ireo mora misendoatra, tsy afa-mandinika… Izay tsy afa-mandinika, manaotao foana. Ireo manaotao […]
Par Taratra sur 29/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Izay ihany e! Tsy misy afa-tsy izay. Aoka ho tony! Vao tamin’ny herinandro lasa teo iny izao ny avy ao amin’ny polisim-pirenena no niantso ny vahoakan’i Fenoarivo Atsinanana ho tony. Taorian’ny sakoroka sy fifanjevoana, niafara tamin’ny fandatsahan’aina ka nahafaty ireo inspektera polisy telo lahy, hoe namita iraka tany an-toerana izany, izay novonoina tamin’ny fomba feno […]
Par Taratra sur 27/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Izany ny tena hoe manao kirin’antitra… Ilay nivoy ny teny filamatra sy tsianjery tamin’ny fotoan’androny hoe ankizy ankehitrio, tompon’ny taona 2000, indray izao ny mbola mibahan-toerana sy mifanahin-jaza ary karazan’ny miverin-tsaina amin’izao fotoana izao. Tsy mahita sy tsy mahalala intsony ny tokony haleha sy hizorana manoloana izao fiainam-pirenena izao. Mitarika ireo mpanao politika ho any […]
… Raikitra vao toran-kovitra
Par Taratra sur 26/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mitranga mihemotra toy ny lelon-jaza ireo kandidà sasany manoloana ny fifidianana ho filoham-pirenena. Raikitra vao toran-kovitra ka mitady amin’ny fomba rehetra hampikatsoana ny firenena anaty kizo. Matoa nanaiky hiditra ao anaty kianja, vonona ny hilalao izay. Tsy izay anefa ny zava-misy fa mila vaniny ireo kandidà 26 namory vahoaka tetsy amin’ny CCI mikatsaka Tetezamita vaovao. […]
Tsy maty voalavo an-kibo…
Par Taratra sur 25/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tapa-bolana sisa ilay andron’ny fifidianana nefa mikononkonona sy miketrika fanakorontanana indray ireo tsy maty voalavo an-kibo, zatra lalan-dririnina. Hadinon’izy ireo fa zo fototra ny mifidy. Aoka tsy hanitsaka izany zon’ny olon-tsotra izany ireo nilatsaka hofidina sasany sy mpanao politika tsy sahy sedra amin’ny fitsaram-bahoaka… amin’ny alalan’ny fifidianana. Efa tapitra ny dimy taona nitondran’ny teo […]
Olom-panjakana hitondra firenena
Par Taratra sur 24/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
« Tsy kilalaon-jaza ny firenena », hoy ny iray amin’ireo kandidà 36 ireo, fony izy efa nitantana an’i Madagasikara. Mbola izy ihany koa no niteny fa « mora manadino ny Malagasy ». Raha raisina ireo teniny roa ireo, toa tsy araka ny nolazainy ny ataony, raha tarafina amin’ity fitakiany hanemorana ny fifidianana ity, iarahany amin’ny kandidà miisa 25. Tsotra […]
Mila voatsiary !
Par Taratra sur 23/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Dia mbola hanohy ny fivorivoriana etsy Ivato indray ireo kandidà mitaky ny hanemorana ny fifidianana. Fa iza moa izy ireo no hanan-jo hanao izany? Efa impiry ny Vaomiera mahaleo tena manomana ny fifidianana (Ceni) no niantso ny mpisehatra eo amin’ny lafiny politika sy ny fiarahamonim-pirenena hanome hevitra momba izay tokony hatao. Tsy nanatrika ireny fivoriana […]
Mba menatra e !
Par Taratra sur 22/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mba menatra e ! Voaporofo indray izao fa misy kitoatoan’olona ny sasany amin’ireo mpirotsaka hofidina. Tena misy kandidà miteniteny foana nefa mitetika ny hitondra firenena.. Aiza koa, efa 16 andro mialoha ny fifidianana, tsy mahalala, na ampahany kely fotsiny aza ny fitsipi-dalao, na ny lalàm-pifidianana hirotsahany sy handraisany anjara. Tsy fantatry ny sasany amin’izy ireo […]
Par Taratra sur 20/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena manao lelon-jaza… Hiditra amin’ny herinandro fahatelo amin’ny fampielezan-kevitra, efa nahavita tanàna sy kaominina ary distrika maro ireo kandidà sasany. Ny hafa kosa, mivoaka miditra sy tsy mazava amin’ny tiany ahatongavana… nefa mirotsaka hofidina. Tadiavina sy tsongolohina avokoa izao rehetra izao ary arangaranga ny tsy fankasitrahana ny fifidianana sy ny filazana ho misy paika maloto, […]
Par Taratra sur 19/10/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Gasy mazava tsara, tena ao anaty rakibolana ny hoe “midedaka”. Ny dikany dia hoe mipingapinga te hisehoseho, te hoderaina… Iza no midedaka ? Iza indray fa tsy ity fitondrana ity, indrindra ny ao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika ao, raha nandray ireo mpilalaon’ny Barea, teny amin’ny Lapan’Ambohitsorohitra, afakomaly. Efa nampoizin’ny rehetra rahateo izany, fa tsy maintsy […]